Markii aad guuraysid - InfoFinland
Nolosha Finland > Deganaanshaha > Markii aad guuraysid
Marka aad guri cusub u guurto, waa in aad arrimo badan oo muhiim ah qabato, sida wargelinta guurista, heshiiska koronta iyo caymiska guriga.
Liiska xasuus-qorka guuritaanka
Markaad guri ka guurto ee aad guri kale u guurto Finland dhexdeeda:
Xasuuso inaad samaysid ogaysiiska guuritaanka (muuttoilmoitus). Ogeysiiska guuritaanka waxaad samayn kartaa ugu horeyn hal bil maalinta guuritaanka ka hor, laakiin ugu dambayn hal usbuuc kabacdi.
Wargelinta guuridda waa in laga sameeyaa Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka (Digi- ja väestötietovirasto). Wargelinta waxaad ka sameyn kartaa
foom aad ka heleyso boostada ama goobta adeegga ee Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka.
Haddii aad dagan tahay guri dabaq ah ama guryaha safka u sasamaysan, xasuuso inaad guuritaankaaga ogeysiisid shirkada guriga qaabilsan (isännöitsijä).
Cinwaankaaga cusub la socodsii dhammaan dhinacyada aad boostada ka heshid oo dhan. Waxaa laga yaabaa in shirkadaha iyo ururada qaarkood ay cinwaankaaga ka helaan xafiiska diiwaangelinta. Si kastaba aha ahaatee adigaa masuul ka ah in, biilashaada loo soo gudbiyo ciwaankaaga saxda ah laguna bixiyo waqtigooda.
Haddii aaad dagan tahay guri jiro ah, xasuuso inaad sii dayso gurigii hore waqti ku filan ka hor. Waxaa haboon inaad sii daynta guriga qoraal ahaan ku gudbisid. Hubi waa intee waqtiga siideynta gurigu. Si caadiga ah waqtiga siideynda (irtisanomisaika) gurigu waa hal bil oo tan kalendarka ah. Wixii macluumaad dheeraad ah ka akhriso bogga InfoFinland Heshiiska kirada.
Haddii aad carruur leedahay u qabanqaabi goobaha xanaanada iyo iskuuladaba. Xanaanada iyo iskuulkaba waa inaad ogeysiiso markii ilmuhu ay ka tagayaan qoobahaas. Sidoo kale waxaa haboon inaad ogeysiis siiso goobaha cusub ee xanaanada iyo iskuulka ee ilmuhu bilaabayaan guuritaanka kabacdi.
Xasuuso inaad waqti fiican raadsatid cawinaada guuritaanka oo suurtogalka ah inaad heshid. Intabadan shirkadaha wax rara waxay ugu mashquul badan yihiin bisha dhammaadkeeda iyo dhammaadka usbuuca (viikonloput).
Laynka internetka iyo telefoonka laguu wareejinayo waxaa wanaagsan inaad qolada aad ka soo furatay wakhti fiican ka hor kala heshiiso, si aysan adeegga ugu imaan wax kala go’ ah.
Siidaa heshiiskii hore ee korontada inta aadan guurin heshiis cusubna sameey. Waxaa haboon inaad is barbar dhigto qiimayaasha shirkadaha korontada, si aad u heshid kan kuugu jaban. Heshiiska korontada waxaad samayn kartaa haddii aad wacdid shirkada adeegga korontada bixisa aadna u sheegtid magacaaga iyo cinwaankaaga cusub.
Haddii aad u guuraysid guri aad adigu leedahay, xasuuso sidoo kale inaad samaysid heshiisyada kale, sida heshiiska biyaha iyo heshiiska daryeelka qashinka. Haddii gurigu leeyahay olyada wax lagu kululeeyo, xasuuso inaad koontaroosho cadadda olyada.
Koontarool, in heshiisyadaada caymisku, sida kan gurigu, ay sidoo kale ku filan yihiin guriga cusub. Haddii aad ka soo guureysid guri dabaq ah una soo guureysid guri aad si gaar ah u leedahay, sida muuqata waxaad u baahan yahay caymis ka duwan kaagii hore.
Guriga aad ka guureyso waa inaad nadiifisaa inta aadan ka guurin waana inaad faaruqisaa meelaha alaabada lagu kaydsado oo dhan iyo garaashka baabuurta.
Haddii aad guri kiro ah dagan tahay, dhamman furayaashii gurigaagii hore u dhiib qofka iska leh guriga ama shirkada guryaha maamusha.
Isbar bar dhig qiimayaasha korontadaFinnish
Adeegyada guuritaankaFinnish | Ingiriis
Adeegyada guuritaankaFinnish | Ingiriis | Ruush
Adeegyada guuritaankaFinnish | Iswidish | Ingiriis
Markaad u soo guurayso Finland
Hadii aad qorshaynayso inaad Finland u soo guurto, waxaad ka helaysaa macluumaad bogga InfoFinland U soo guurista Finland. Hadii aad rabtid xogta aad ku hawl galaysid ee la xidhiidha arimaha u soo guutista Finland, ka akhri bogani Liiska xusuusta ee u soo guuraha Finland.
Hadii aad imika u soo guurtay Finland, waxaa waajib kugu ah inaad isku diwaangeliso daganaansho. Ka akhri xogo dheeraada bogga InfoFinland Isu diiwaangelin degene.
Ma waxaad dooneysaa inaad Finland dal kale uga guurto? Wixii macluumaad dheeraad ah ka akhriso bogga InfoFinland Ka guuridda Finland.
Markii ugu dambeysay ee waqtiga lala simay: 01.04.2021 Boggan war-celin ka soo dir